Krasnoyarsk State Medical University - Dzidza Medicine muRussia
guta : Krasnoyarsk
inotangwa : 1942
Musakanganwa kuti kurukura Krasnoyarsk State Medical University
Kunyoresa pana Krasnoyarsk State Medical University
Krasnoyarsk State Medical University ndomumwe yakanakisisa Africa kwete chete kuSiberia uye kuFar East asiwo muRussia. Vakapedza kudzidza kwedu kushanda munyika yose kusanganisira Antarctica. Kupfuurisa 30 dzakawanda mushandirapamwe zvibvumirano vakanga yakasainwa pamwe mumayunivhesiti dzimwe nyika.
Krasnoyarsk State Medical University ndiye akatanga kusuma uye setifaya unhu utariri hurongwa, uye 2007 tine dhipuroma of All-Russian makwikwi "Quality System rokugadzirira Vakapedza kudzidza Educational Institutions pamusoro Professional Education". mu 2008 yunivhesiti akakunda mumakwikwi "System pamusoro Nyanzvi Training Quality Panga". mu 2009 KrasSMU aivapowo mukati mazita "100 Best Yepamusoro Education Institutions yeRussia". mu 2010 pamwe chibvumirano zvikanyorwa pamwe World Federation nokuda Medical Education (WFME) uye Association nokuda Medical Education muEurope (Amee). mu 2011 Yunivhesiti rave semunhu mumwe pamusoro-chechetere mumayunivhesiti yeRussia uye waibatanidzwa National Register yokutungamirira masangano dzidzo Russia. Mugore iroro isu vakazokwidza All-Russian makwikwi "Healthy Lifestyle Yepamusoro Education Institution". mu 2012 uye 2014 yunivhesiti yedu yakava Kumukundi of All-Russian makwikwi "The Best Educational Chirongwa pamusoro Innovative Russia".
Anoverengeka masayendisiti edu with reRussian Federation Hurumende Prize uye Mubayiro the President of Russian Federation vasayendisiti vaduku mumunda zvesainzi.
Krasnoyarsk State Medical University anoshanda nesimba kuti tive nechokwadi chokuti mudzidzi wose anopinda Krasnoyarsk State Medical University ainzi pashure Prof. V.F Voino-Yasenetsky achagamuchira dzidzo.
Rorusununguko Basic Medical Education
Medical weVadzidzisi Vedare
Department of Medical Cybernetics uye Rungadzora Health Care
Rorusununguko pre-kuyunivhesiti uye chinopfuurira yekosi kurovedzwa
Branch Kurovedza kune evanhu basa
Krasnoyarsk State Medical Institute rakavambwa November 21, 1942 Mutongo All-Union Committee musi Yepamusoro Education paDare vanhu Commissars uye vanhu Commissariat Eutano of USSR nokuda kwemapazi akatizira Krasnoyarsk Voronezh Dental Institute, chikamu 1st Leningrad Medical uye 2-First Leningrad Medical Institute, uyewo Leningrad chiremba Institute uye Leningrad Institute of Dentistry. 
Mune nyaya yevadzidzi vokutanga KSMI makumi mashanu-mumwe chiremba.
asati 1958, Institute akanga chirongwa kudzidziswa chete – General Medicine, mu 1958, chiremba fakaroti rakazarurwa.
mu 1978, ari Dental School wakashamira.
mu 1992-2013 makore, vakapedza yepamusoro ukoti dzidzo fakaroti.
mu 2006, simba rorusununguko Pharmacy yakavhurwa.
mu 2010, weDhipatimendi Clinical Psychology yakavhurwa
mu 2011, zvokurapa cybernetics fakaroti yakavhurwa.
Unoda kurukura Krasnoyarsk State Medical University ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
Krasnoyarsk State Medical University iri Map
Photos: Krasnoyarsk State Medical University pamutemo Facebook
Krasnoyarsk State Medical University wongororo
Join kukurukura pamusoro Krasnoyarsk State Medical University.
Moscow Institute of Physics uye Technology Moscow